कोरोनाका बिरामी ब`ढ्दै गएपछि आजबाट सरकारले जारि गर्यो ७७ जिल्लामा यस्तो सूचना, घरबाहिर ननिस्कनु होला ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोनाका बिरामी ब`ढ्दै गएपछि आजबाट सरकारले जारि गर्यो ७७ जिल्लामा यस्तो सूचना, घरबाहिर ननिस्कनु होला !
‘लकडाउन’लाई थप कडा पार्न गृह-मन्त्रा`लयले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । म`न्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आज परिपत्र गर्दै पास-विनाका कुनै पनि सवारी साधन आवत जावतमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको गृ`ह म`न्त्रालयले जनाएको छ ।
बीचबाटोमा पुगेका र विच`ल्लीमा परेका मजदू`र र सर्व`साधारणलाई उ`द्धारका लागि साँ`झको समयमा केही दिन सवारी सञ्चा`लनमा अनौपचा`रिकरुपमा खुकुलो गराइएकाले अधिकां`शको उद्धा`र भइसकेको गृह मन्त्रा`लयको ठहर छ । त्यसैले मन्त्रालयले आजदेखि पासविनाका सबै प्रकारका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउन भनेको हो ।
सोमबार गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गर्दै पासबिनाका कुनै पनि सवारी साधनलाई आवत जावतमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ। यसैबीच गृह मन्त्रा`लयले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सवारी साधनलाई पास वितरण नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पुन: निर्देशन दिएको छ । पासको दुरुपयोग गरेर मानिसको भीडभाड बढेको भन्दै गृहले त्यसलाई कडाइ गर्न निर्देशन दिएको हो । सवारी साधनमा हुल`मुलका साथ यात्रा गर्दा कोरोना संक्र`मणले थप जटिलता निम्ताउन सक्ने भएकोले कडाइ गरिएको गृहको भनाइ छ।
हुलमूलका साथ सवारी साधनमा यात्रा गर्दा कोभिड– १९ सङ्क्र`मण भएर थप जटिलता निम्त्याउन सक्ने खत`रालाई ध्यानमा राखेर उक्त निर्देशन दिइएको मन्त्रा`लयले जनाएको छ । लकडाउनलाई सरकारले वैशाख २५ गतेसम्म लम्ब्याएको छ । अहिलेसम्म मुलुकमा ५२ जनामा कोभिड– १९ सङ्क्र`मण पुष्टि भइसकेको छ । लामो लकडाउनका कारण सर्वसाधारणले खुकुलो बनाउने आशा बोकेको बेला मन्त्रा`लयको यो सूचना`सं`गै अझ केहि दिन घरभित्रै बसी सरकारलाइ सहयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।
काठमाडौँबाट घर ल्याउन हो`डबा`जी, सीमापारि रहेकालाई बेवास्ता
अध्ययन, कामकाज तथा अन्य कारणले काठमाडौँमा रहेका कञ्चनपुर वासीलाई गृह जिल्ला ल्याउन भीमदत्त नगरबाट दिनहुँ सवारी (बस) पठाउने काम भइरहेको भए पनि सीमावर्ती भारतीय बजारमा लामो समयदेखि आश्रय लिइरहेका नेपाली मजदुरलाई स्वदेश ल्याउने विषय अझै किनारा ला`ग्न सकेको छैन ।
काठमाडौँबाट कञ्चनपुर, कैलाली लगायतका जिल्लामा जान काठमाडौँमै रहेर प्रतिनि धिसभा सदस्यदेखि पूर्वमन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र विद्यार्थी नेता अग्रसर रहेको देखिएका छन् । सामाजिक सञ्जा`लमा राहत वितरण र उ`द्धार गरी घर पठाउने विषयले चुनावी झझ`ल्को दिए पनि झण्डै एक महिनादेखि घर आउन नपाएर सीमा“वर्ती भारतीय बजारका विद्यालयमा आ`श्रित नेपाली मज`दुर घर ल्याउन जनप्र`तिनिधिका साथै प्रदेश र स्था`य सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन ।